Pụtara nke otu na ndị ọrụ na Debian GNU / Linux | Site na Linux
Pụtara nke otu na ndị ọrụ na Debian GNU / Linux
Na GUTL Wiki Achọtala m isiokwu dị oke mkpa ebe akọwapụtara otu ọ bụla na onye ọrụ na sistemụ ahụ Debian (y GNU / Linux mgbe niile).
Iji nye ndị ọrụ ọhụrụ ntakịrị nghọta banyere nke a, otu dị iche iche na-ekwe (ihe ndị ọzọ) na ndị ọrụ edebanyere aha na sistemụ ahụ, nwere ike ịrụ ọrụ ụfọdụ dịka ọrụ otu ahụ si dị. Aga m akọwa nke a n'isiokwu ọzọ 😀
Anyị nwere ike ịhụ ha n’otu n’otu na tebụl na-esonụ:
Ọrụ / Kwuru
mgbọrọgwụ Superuser: ohere zuru ezu na sistemụ. Abụkarị naanị onye ọrụ root o kwesiri isonye na otu a.
adm Nlekota oru sistemụ. Ahapụ iji xconsole ma gụọ faịlụ site na /var/log na-enweghị iji iwu su o sudo. Ọ na-abụkarị maka ndị nchịkwa. Aha otu a sitere /var/log na mbụ ọ bụ /usr/adm ma emesia /var/adm
audio Enye ohere ohere ọdịyo ngwaọrụ.
ndabere Kwe ka ịchekwa ma weghachite na-enweghị inye ikikere onye ọrụ ikike.
Abụ Ugbu maka ihe kpatara nke ndakọrịta na ngwa ngwa. Ngwa ọhụrụ ekwesịghị iji otu a.
CD ROM Enye ohere ohere ngwa anya mbanye.
daemon Ọrụ ndị dị mkpa iji dee na diski. Maka ebumnuche nchekwa, ọ ka mma na ọrụ ọ bụla nwere otu ya.
asụsụ Direct uzo serial ọdụ ụgbọ mmiri. Ndị otu a nwere ike ịhazigharị modem ahụ, kpọọ ya ebe ọ bụla, wdg.
mikpuo Na-enye gị ohere iji ngwaọrụ dịka pppd, pon y poff iji mee njikọ na sistemụ ndị ọzọ, na-eji faịlụ nhazi akọwapụtara na ndekọ ndekọ /etc/ppp/peers. Otu aha pụtara "Dialup IP".
diski Nweta directo ka discs. Ihe dika ohere inwere root na diski. Onye ọrụ ekwesịghị ịbụ nke otu a, ma ọ bụ na ha nwere ike ịme ihe na-adịghị mma cat /dev/zero > /dev/sda.
fax Na-enye gị ohere iji zipu ma ọ bụ nata faksị.
floppy Enye ohere ohere a floppy mbanye.
egwuregwu Egwuregwu ụfọdụ na-eji ya iji chekwaa ọtụtụ.
gdm GDM na-eji ya (Gnome Display Manager).
anwụnta Jiri ya gnats.
haldaemon Jiri ngwaike abstraction oyi akwa.
kwusi Banye iji mechie usoro ahụ.
wdg Jiri ọrụ IRC. (A chọrọ onye ọrụ static n'ihi ahụhụ na ircd)
klog Jiri ya klogd, osisi kernel.
kmem N'ihi na mmemme ndị chọrọ kpọmkwem na-agụ ohere ka usoro ebe nchekwa. Otu a nwere ike ịgụ /dev/kmem na faịlụ ndị ọzọ yiri ya. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke BSD.
ndepụta Maka ijikwa listi nzipu ozi. Programsfọdụ mmemme nke ụdị a na-ejikwa onye ọrụ nwere otu aha.
lp Directbanye na ọdụ ụgbọ mmiri yiri ya. Otu a ka ọdịnala si ebi akwụkwọ.
mkpa Na-enye gị ohere ịgbakwunye, gbanwee, ma wepu ndị na-ebi akwụkwọ site na foomatic, iko, na ikekwe ọdụ data data ndị ọzọ.
mail Ide ihe na /var/mail. Jiri ya site na MTA na MUA.
ebube Mere Majordomo ji akụkọ ihe mere eme. Ọ naghị awụnye na sistemụ ọhụrụ.
nwoke Mgbe ụfọdụ ihe omume man dee na /var/cache/man.
ozibus Jiri dbus ọrụ (dbus-daemon-l)
ozi ọma Ide ihe na folda akụkọ. Jiri ọrụ na mmemme ozi ndị ọzọ (nntp protocol)
otu Jiri ọrụ ndị anaghị achọ ịnwe faịlụ ọ bụla. A na-ejikọta ya na onye ọrụ nobody.
ọrụ Dị maka akụkọ ihe mere eme naanị ịgwa ndị na-arụ ọrụ. Iji nwekwuo ikike ọ ka mma iji ụlọ ọrụ sudo.
nkwụnye Enye ohere ohere nke mbughari ngwaọrụ ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-adịghị ahazi na /etc/fstab. Ọ bara uru maka ndị ọrụ mpaghara chọrọ itinye USB, wdg. Ejiri site na mmemme pmount (nke na-ebugharị ngwaọrụ mbugharị na nhọrọ nodev y nosuid).
nzipu ozi Jiri ya site na MTA Postfix.
postgres Njikwa ọdụ data PosgreSQL. Ọ bụ naanị onye ọrụ na-eji ya postgres
proxy Maka ọrụ (na-abụkarị ọrụ nnọchiteanya ọrụ) nke na-enweghị raara onwe ya nye onye ids na kwesịrị ịnwe faịlụ. Na-ejikarị ya squid y pdnsd.
gwọọ Gbakwunyere site sane-utils. O yiri ka ejighị ya mee ihe.
sull Na-enye ohere ide ihe na /etc/sasldb na / ma ọ bụ /etc/sasldb2, nke a na-eji maka sasl nyocha. A na-ejikarị ya maka nyocha ihe nkesa IMAP, POPma SMTP.
nyocha Na-enye gị ohere iji nyocha.
onyinyo Enye ohere ọgụgụ nke /etc/shadow. Jiri ụfọdụ mmemme dị mkpa iji nweta faịlụ a.
shutdown Banye iji mechie usoro ahụ.
src Onye nwe koodu iyi, tinyere faịlụ nke /usr/src. Enwere ike iji ya nye onye ọrụ ikike ijikwa koodu isi.
ssh Iji gbochie ọgụ si ptrace. Jiri ssh-gị n'ụlọnga.
mkpara Ahapụ ọrụ /usr/local, /var/local y /home. Ọ na-abụkarị maka ndị ọchịchị tụkwasịrị obi.
sudo Ndi otu a ekwesighi itinye okwuntughe ha mgbe eji sudo. Lee /usr/share/doc/sudo/OPTIONS.
mmekọrịta Banye ka mmekọrịta usoro. A na-ejikarị ọrụ mmekọrịta (yana shei) /bin/sync)
sys Ugbu maka ndakọrịta ihe.
syslog Jiri ya syslog, blog nzube dum.
teepu Na-enye ohere ịnweta ihe ntanetị.
tty Jiri ya write y wall ide na tty nke ndi oru ozo. Ngwaọrụ tty y /dev/vcs isịne ke otu emi.
ugw Jiri UUCP subsystem jiri ya.
ọrụ Iji kee ndị ọrụ ọhụụ. Lee ihe edere na njedebe nke isiokwu a.
utmp Na-ahapụ ka ịdegara /var/run/utmp, /var/log/lastlog, na faịlụ ndị yiri ya. Jiri ụfọdụ ọnụ emulators.
video Enye ohere ohere video ngwaọrụ.
olu Ozi olu. Ọ bara uru maka sistemụ na-eji modem dịka igwe azịza.
wheel Ahapụ iji iwu ahụ su. Enwere nkwarụ na ndabara (lee /etc/pam.d/su maka nkọwa ndị ọzọ, yana Ngalaba 9.2.2 na ntinye Debian).
www-data Maka ịde data site na sava weebụ. Onye ọrụ www-data okwesighi ibu ya nwe ya nke ọdịnaya weebụ, ma ọ bụ ihe nkesa na-adịghị mma ga-ekwe ka e degharịa weebụsaịtị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Pụtara nke otu na ndị ọrụ na Debian GNU / Linux
??? ndo ma m ka amaghi akwukwo
Nwere ike ịnye m njikọ ebe m nwere ike ịmụ maka ụdị teknụzụ dị otu a, biko?
M ka mma imelite post ma kọwaa ntakịrị ihe na-eme 😀
Daalụ maka ozi ọ bara ezigbo uru, ebiela m ya ma debe ya aka maka ịgba izu.
Ana m achikota ciment ime gi ihe ncheta… daalụ.
Ha, Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ maka ihe ncheta, mana nke ahụ bụ otu n’ime ọtụtụ ihe m jụrụ onwe m ogologo oge na maka x ihe kpatara na anaghị m ewepụta oge iji chọpụta, ozi bara ezigbo uru.
Daalụ Elav 😉
Akwa, ọ dị ka ibipụta.
Ọnwa ole na ole gara aga, adị m ka onye nzuzu chọrọ ụdị ihe ahụ.
Ezigbo isiokwu. Ọ na-adịkarịkarị ịgụ otu ihe ọmụma bara uru dị otú ahụ. Daalụ nke ukwuu.
hello ọ nwere ike ịbụ ntakịrị machica nke dị n'elu
Ndewo. Ana m eke onye ọrụ ọhụụ yana ọ dị m mkpa ịmara ma nhọrọ ndị m lere anya ha ziri ezi: adm, cdrom, dip, egwuregwu, lpadmin, nopasswdlogin, plugdev, sambashare.
Ihe m chọrọ bụ na onye ọrụ nwere ike ịme ihe niile onye nchịkwa na-eme mana na-ejighi "sudo". Ihe ọzọ bụ, enweghị paswọọdụ, ya bụ, ọ na-abanye na akpaghị aka na-enweghị idebe paswọọdụ.
N’ịtụle na nke a bụ oge mbụ m na-eme ya, ọ dị mma na nke a ka ọ bụ na m gbanwere ihe?
US Air Force migrates Linux n'ihi nje
Debian bụ nkesa kachasị eji na sava weebụ